Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Denmark oo Kuhor Mudaaharaaday Safaarada Shiinaha ee Kutaala Caasimada Copenhagen
Posted by ONA Admin	/ November 21, 2014
Jaaliyadda Somaalida Ogadenya ee kudhaqan dalka Denmark ayaa maanta mudaharaad balaadhan kuqabtay safaarada wadanka Shiinasha uu kuleedahay magaalo madaxda dalka Denmark ee Copenhagen. Banaanbaxan ayaa bilowday maanta oo Jumce ah taariikhduna ay tahay 21/11/2014 saacadu markay ahayd 15:00 galabnimo ee wakhtiga Copenhagen kana bilowaday afaafka hore ee safaarada wadanka Shiinuhu uu kuleeyahay Copenhagen.
Waxaa mudaaharaadkan kasoo qaybgalay dad badan oo kamid ah shacabka Somalida Ogadenya. Banaanbaxan waxaa lagu canbaareeyay shirkadaha Shidaalka ee laga leeyahay wadanka Shiinaha kuwaaso baryahan danbe khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay kumanaystay wadanka Somalida Ogadenya isku dayay inay sisharci darro ah kulasoo baxaan iyadoon shacabkii xaqa ulahaa aan lagala tashanin.
Shirkadahan Shiinaha ee shidaalka kaqoda Ogadenya ayaa qayb wayn kaqaatay gumaadka iyo baro-kicinta uu Gumaysiga Itoobiya kawado dalka Ogadenya. Hadaba Jaaliyada Somaalida Ogadenya ee wadanka Denmark waxay Cabashadooda oo qoraal ah ugudbisay qaar kamid ah shaqaalaha Safaarada Shiinaha.
Kaqaybgaleyaasha mudaaharaadkan ayaa kudhawaaqayay erayo muujina sidayna marna raali uga noqonaynin waxay shirkadaha shiinuhu kawadaan wadanka Ogadenya sidookale shacabku waxay wateen boodhadh cadaynaya muuqaalo iyo qoraalo katurjumaya xasuuqa eey qeybta kayihiin shirkadaha Shidaalka China kawadaan dhulka Ogadenya.